४२ लाखको लागतमा शिवशक्ति विश्वकर्मा समाज भवन निर्माण – erupse.com
पोखरा / ४२ लाख रुपैयाँको लागतमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १३, पाटनबेंशीमा नवनिर्मित शिवशक्ति विश्वकर्मा समाजको भवनको उद्घाटन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा स्थापनादेखि हालसम्मको आयव्यय पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा चन्द्रमुखी विश्वकर्मा आमा समूह, फूलबारीबाट ५० हजार ५ सय ५ रुपैयाँ र मादी गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थायी घर भइ हालः पोखरा–११, रानीपौवानिवासी पूर्णकुमारी गुरुङबाट २१ हजार रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको समाजका महासचिव बेलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माणका लागि विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ ।